Mas'uuliyiin loo xirxirey maxaabiis lagu dilay Balad Xaawo - BBC News Somali
Mas'uuliyiin loo xirxirey maxaabiis lagu dilay Balad Xaawo
Maamulka goboleedka Jubbaland ayaa xabsiga u taxaabay saddax ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo kadib markii afar nin oo eedeysanayaal ah inta xabsiga lagala baxay lagu toogtey magaalada.
Wxay kala yihiin guddoomiyihii degmada, taliyihii ammaanka iyo madaxii arrimaha bulshada.
Ragga la toogtay ayaa lagu eedeeyay in lagu qabtay hub iyo bambaanooyin waxyar uun kadib markii ay bambaano ku weerareen guri uu degenaa nin oday dhaqameed ah. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in raggani la toogtay ka hor inta aan maxkamad la soo taagin.
Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur oo ku sugan magaalada Balad Xaawo ayaa BBC-da u xaqiijiyey xarigga mas'uuliyiinta.
Waxaa la tuhunsan yahay in ragga la laayay ay ka tirsanaayeen Al Shabaab
Wasiirka ayaa sheegay in inkasta oo Shabaab dagaal kala dhaxeeyo hadana aysan ahayn in sharciga la jabiyo.
Mas'uuliyiin loo xiray maxaabiis lagu dilay Belad Xaawo
Guddoomiyaha hay'adda Difaacayaasha Xuquuqul Insaanka Bariga Africa Xassan Shire Sheekh ayaa BBC-da u sheegey in dilka raggaasi uu yahay fal xad gudub ku ah xuquuqda aadanaha, islamarkaasina ay ahayd in maxkamad lasoo taago oo ay caddaalad helaan.
Isaga oo ku sugan magaalada Kampala ayuu sheegey in maamulada dalka ka jira aysan illaalinin xuquuqda asaasiga ah ee dadka, isaga oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba ugu baaqay in ay caddaalada hor keenaan mas'uuliyiintii dilka amray, iyo in wax laga qabto nidaamka garsoorka.
Dowladda Federaalka waxa ay leedahay maxkamadda ciidamada qalabka sida, taasi oo fulisey xukuno badan oo dilal ah iyo muddo xabsi ah oo lagu fuliyey dad loo heystey eedeymo la xiriira in ay Alshabaab ka tirsanyihiin, amaba lagu heley falal ay geysteen.
Dacwad kasta oo ku saabsan xubnaha lagu tuhunsan yahay Shabaab waxaa la geeyaa maxkamadda ciidamada.
Warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International sanadkii 2014-kii ayay ku eedeysey in xukunnada dilka ah ee ay fuliyaan maxkamadda ciidamada ay yihiin kuwa xad gudub ku ah xuquuqda aadanaha, islamarkaasina aanan loo marin wadadii sharciga ahayd ee caalamka looga dhaqmo.
Waxaa la filayey in ay maanta dowladda Kenya dib u furto soohdinta ay Soomaaliya
Amneysty waxa ay sheegtey in eedeysanayaasha aanan loo ogolaanin in ay garyaqaan qabsadaan, in ay naftooda difaaci karaan iyo in dhagaysiga dacwadaha loo ogolaado dadweynaha si daah-furnaan meesha u timaado. Waxa kale oo ay hay'adda sheegtey in dadka la xukumey aanan loo ogolaanin in ay rafcaan ka qaataan xukunka dilka ah ee ku dhacay. Maxkamadda ayaa eedeymahasi beenisay.
Bishii Maarso ee sanadkan 2017, maxkamad ciidan oo ku taala magaalada Boosaaso ayaa 7 nin oo Shabaabnimo loo heystey ku xukuntey dil toogasho ah kadib markii sida sheegeen mas'uuliyiinta maamul goboleedka Puntland lagu heley in ay ka tirsanaayeen unug xagga dilalka gaadmada ah u qaabilsan Alshabaab oo halkaasi ka hawlgasha.
Meelo kala duwan oo dalka ka mid ah waxaa xabsiyada ka buuxa dad aad u badan oo qaarkood xukumanyihiin, qaarkoodna xukun sugayaal yihiin oo loo heysto eedeymo la xiriira in ay Alshabaab ka tirsanyihiin.
Daawo: Xaguu marayaa dhismaha darbiga xadka Kenya iyo Soomaaliya